Camsurf वैकल्पिक - क्याम च्याट U LIVE कुराकानी
भिडियो च्याट कोठा र प्रत्यक्ष वेबक्यामहरू - नि: शुल्कको लागि। के राम्रो छ: यू लाइभ च्याट वा क्यामसर्फको भिडियो च्याट?
भिडियो च्याट मार्फत नयाँ र पुराना साथीहरूको सम्पर्कमा रहनुहोस्
यू लाइभ च्याटको भिडियो च्याट क्यामसर्फको भन्दा राम्रो हो। यहाँ कुनै अनियमित च्याट रूले छैन - तपाईले चाहानु भएको जोसुकैसँग च्याट गर्नुहोस्।
सार्वजनिक वा निजी च्याट कोठा
हाम्रो सार्वजनिक वा निजी कुराकानी कोठाको हिस्सा बन्नुहोस्, विश्वभरका मानिसहरूसँग भिडियो च्याटको आनन्द लिनुहोस्
हाम्रो अज्ञात भिडियो कुराकानीले तपाईंको पहिचान गोप्य राख्न सम्भव बनाउँदछ। त्यो Camsurf संग संदिग्ध छ।
धेरै अचम्मका स्टिकरहरू
क्यामसुर्फको विपरीत, यू लाइभ च्याटमा स्टिकरहरूको एकदम अचम्मको दायरा छ। तपाईको च्याट पार्टनरलाई खुशी पार्न केवल एउटा छनौट गर्नुहोस्। उनीहरू इशाराको कदर गर्दछन्। यसले तपाईलाई तिनीहरूमा साँच्चिकै रुचि राख्ने देखाउँदछ। तपाईं कसरी यो धनी प्रस्ताव को उपयोग गर्नुहुन्छ? कि त तपाईंले किन्नुभएको सिक्काको साथ स्टिकरहरू किन्नुहोस् वा तिनीहरूलाई मतमा जित्नुहोस्।
अनियमित भिडियो च्याट, पूर्ण नि: शुल्क
धेरै प्रयोगकर्ताहरू क्याम्सर्फको भिडियो च्याटबाट थाकेका छन्। स्पष्ट रूपमा, तिनीहरूले यसको माध्यमबाट प्रेम वा मित्रता फेला पार्न सकेनन्। क्यामसर्फमा अनियमित वेबक्याम च्याट छैन, यो प्रिसेट हो। U LIVE च्याटबाट भिडियो च्याटको साथ प्रेमको खोजी गर्नुहोस्। तपाईं र सुन्दर महिलाहरू र तपाईंलाई भेट्न चाहने सुन्दर पुरुषहरू बीच त्यहाँ केही क्लिकहरू छन्। अनियमित भिडियो च्याटको माध्यमबाट कसैलाई भेट्नु धेरै राम्रो हुन्छ सामाजिक मिडियाको माध्यमबाट।
वेबक्याम च्याट - लाइभ र लात
Camsurf गरीब लाइभ वेब कैमरा च्याट प्रदान गर्दछ, U LIVE च्याटको विपरीत। हामी भिडियो कलहरू र वेबक्याम प्रदान गर्दछौं तपाईंको लागि चीजहरू अझ रमाइलो बनाउन। तपाईंको कुराकानी निजी हो; तपाई र तपाईको पार्टनरलाई कसैले पनि गडबड गर्दैन। यो केवल भिडियो कुराकानी हो र तपाईं दुई।